Tombontsoa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Fitsipi-pitondran-tena mandritra ny oram-baratra. Ny hevitra rehetra !!
Fitsipika momba ny fitondran-tena mandritra ny oram-baratra. Ny zava-drehetra dia manondro isa !! Ny oram-baratra dia tranga voajanahary tsara tarehy sy lehibe. Saingy nitondra loza lehibe ny oram-baratra - varatra. Mba hiarovanao tena amin'izy ireo dia mila manaraka fitsipika vitsivitsy ianao. ...
Inona no atao hoe pattera?
Inona no atao hoe twister amin'ny lela? Ny fiteny twitter dia natao hampivelarana ny kabary, hanatsarana ny diksionsy sy ny fialamboly. Mila mamaky twister amin'ny lela hatramin'ny fahazazany ianao, satria ny famakiana twister amin'ny lela sy ny fitadidiana azy ireo dia manampy amin'ny famoronana kabary tsara tarehy mihitsy aza, mampianatra anao hanonona ...
Tena tsara ny fanoratana amin'ny fanatanjahantena
mahafinaritra ny lahatsoratra iray momba ny lohahevitra ara-panatanjahantena.Nampita ahy ho an'ny andrana ity andrana iray ity ny mpianatro. Tsara toy inona ... Sports! Teny fohy sy tena ilaina amin'ny fiainan'ny olona io. Tsy azo eritreretina ny fiainantsika raha tsy ...
4 dia kilasy iray an-dàlambe, milaza izay hanehoan'ny olona ny nofin'ny fiadanana sy ny firindrana.
Angano kilasy faha-4, ohabolana izay nanehoana ny nofinofin'ny olona momba ny fihavanana sy ny firindrana miaraka raha tsy misy namana ao am-pon'ny tadio. Raha mifikitra ianareo dia tsy afaka matahotra na inona na inona.
Ny tombontsoa sy ny tsy fitovian'ny rafitra ara-toe-karena nentim-paharazana, fandrindrana sy tsena.
Tombony sy fatiantoka ny toekarena nentim-paharazana, baiko ary tsena. FAMPANDROSOANA TRANJANAKA - ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manankarena, - tsy an'asa.
Iza ireo atleta grika malaza, hatramin'izao anio izao? Ireo dia lavitra dia nantsoina hoe Milon, Polydam, Feagen.
Inona no nanjary nalaza tamin'ireo atleta grika, izay manana ny anarany mandraka androany? Ny anaran'ireo fiaingana ireo dia Milon, Polydam, Theagen. Milon - izy no mpandresy tamin'ny Olympus in-6, ny lalao Polidam - nandehandeha tamin'ny liona niaraka tamin'ny tanany Feagen izy - nandresy ...
Mianara haingana ny andininy iray! Araka ireo boky sy gazety manome valiny izay manampy anao!
Ahoana ny fomba hianarana andininy iray haingana! Haisoratra boky Omeo ny valiny manampy anao! Dingana 1: Raha te hahalala andininy iray haingana dia vakio mafy. Ataovy in-2-3. Dingana 2: Rehefa mamaky ...
Fampivoarana ankolaka Fampandrosoana tsy mivantana, na fivoarana misy metamorphoses, zavamananaina iray, rehefa hita, mba hanosehana ny budova ho lasa zavamananaina matotra, dia mitaky vashtovaya tsotra kokoa, angamba zavamananaina manokana ho an'ny reny, ny embryon toa izany dia antsoina hoe larva. Mimenomenona ny larva, ...
inona no dikan'ilay prefix?
izay midika hoe ny prefika U ny prefika y dia midika hoe faran'ny hetsika: maty an-drano, tafatsoaka, lasa. Ny prefiks dia ampahany kely amin'ny teny izay ampiana amin'ny teny iray hanovana azy, ohatra: Manazava, manamafy, mieritreritra. ...
famakafakana morphological misaotra anao aho Irina misaotra betsaka! Irina, na azonao atao ny manoratra famakafakana morphological an'ny mpisolo anarana CAM; Izay tsy mitondra tena dia tsy hampianatra ny hafa. Inona ny tany, toy izany koa ...
fanadihadiana amin'ny alfabeta amin'ny teny yaki ho an'ny kilasy 3 URGENT!
fanamafisam-peo amin'ny teny yaki ho an'ny kilasy 3 URGENT! andriamanitra .... eto irery misaotra…. toa e sefo !!! tsy 5 c ++++++++++++++++++++++++++++ fa 6 ++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ misaotra. Misaotra. Maninona raha mino azy ireo tsara ...
Hanampy amin'ny devoara. Endriky ny matoanteny amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Manampy amin'ny entimodinao. Mamolavola endrika mampitaha ny adjectif Tsara mangidy ratsy ratsy mamy mamy ary manorata ambaratonga fampitahana adjectives JUICY, COMFORTABLE, TASTY. MAZAVA, MAFY, MAFY, ...
moa ve ny 1, 2, 3 fanambarana?
ny fanambarana voalohany, faha-1, faha-2? 3 fivoahana 1 fivoahana 2 fivoahana 3 famoahana: anarana vehivavy, ohatra: dacha, vorona, sarontava, sotro, satroka. Fanambarana faharoa: anarana lahy sy vavy, ohatra: palitao, ...
Teny fampidirana ve ny teny hoe "na izany aza"?
Teny fampidirana ve ny teny hoe "na izany aza"? eny eny, teny fampidirana ity. Ny teny kosa dia fampidirana raha miseho ao anatiny na any amin'ny faran'ny fehezanteny iray: Ganin, na izany aza, tsy nalala-tanana loatra tamin'ny ...
Manampy amin'ny fananganana ny teny, mihodinkodina, mikarakara, malalaka, malalaka, miverina.
Ampio hamantatra ny teny, rustles, caresses, malalaka, malalaka, hiverina aho. 1. Rustle - faka sy fotony, izy - mifarana. 2. manafosafo - faka, a - tovana, et - famaranana, safosafo ...
Manomeza ohatra momba ny professions
Manomeza ohatra ny fahaizana manokana momba ny asa Ny asa dia ilaina amin'ny fiaraha-monina, faritra voafetra (noho ny fizarazarana ny asa) fampiharana ny hery ara-batana sy ara-panahy an'ny olona iray, manome azy ny fotoana misy sy mivoatra ho takalon'ny asa ampihariny. ...
Alefaso azafady !!! Mila tantara fohy momba ny fanokafana ny rafitra Periodikan'i Mendeleev aho
Ampio azafady !!! Mila tantara fohy momba ny fahitana ny vanim-potoana PERIODIC SYSTEM MENDELEEV aho vanim-potoana # 769; ical system # 769; ma chem # 769; ich elemental # 769; ntov (table # 769; tsa Mendele # 769; eva) fanasokajiana ireo singa simika, fametrahana fiankinan-doha amin'ny toetra isan-karazany amin'ny singa amin'ny fiasan'ny vatan'ny atôma. Ny rafitra dia ...
inona ny polyudye, fasana, lesona
inona ny polyudye, tokotanim-piangonana, lesona KOZACHKA Polyudye dia fomba iray fanangonana fanomezana avy amin'ireo foko Slavia Atsinanana, izay natao nandritra ny taonjato 9-12 tany Russia. Pogost dia tanàna kely iray, ivon'ny paroasy, misy fiangonana sy fasana, misy tranon'ny pretra ...
inona ny anarana
inona no atao hoe anarana Ny anarana iray dia ampahany tsy miankina (manan-danja) amin'ny kabary izay manondro zavatra iray ary mamaly ireo fanontaniana iza? , inona? (tany, Russia, manga, mandeha, fifaliana). Ny anarana dia teny izay ...
Taona maro teo amin'ny governemanta sy ny taonan'ny raharahan'i Vladimir Lehibe
Ny taona nanjakan'i Vladimir Great KhZ 980-1015 tamin'ny taona 980 ka hatramin'ny 1015 Vladimir dia zanaky ny Grand Duke of Kiev Svyatoslav Igorevich sy ny mpikarakara ny reniny, Grand Duchess Olga, Malusha. ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 326 Next Page
80 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,592.